Ilaahey Naxariistii Jano ha siiyee Marxuum Gaashaanle Sare Cabdullahi Cabdi Xasan oo ku magac dheeraa(Cabdullahi Cabdi Waraabe) waxaa uu kaalin weyn oo aan la ilaawi karin ka soo qaatey halgankii xorinimo doonka ummada Soomaaliyeed
Alle ha u naxariistee marxuumku waxa uu ku dhashey degmada Afmadow ee Gobalka Jubada Hoose bilowgii sanadka 1938dii. Waxa uuna waxbarashadiisa dugsi hoose, dhexe ilaa dugsi sare ku dhamaystay gobalka Jubbada Hoose & magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxuu aqoonta sharciyada ku qaatey magaalada Muqdisho iyo akadeemiya Moderno ee dalka Taliyaaniga, isagoo si gaar ah ugu takhasusay Sharciga.
Waxuu Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ku soo biirey sanadkii 1959kii, isagoo xiligaas ku sugnaa xarunta gobalka Jubada Hoose ee Kismaayo. waxuu ciidanka ka hor mid ahaa dhalinyaradii ugu firfircooneyd ee halganka xornimada doonka Soomaaliyeed ee gobollada Jubooyinka.
Marxuumka ayaa ahaa sharci yaqaan aad looga yaqaaney ciidanka booliiska Soomaaliyeed, isla markaasna ahaa macalin sharciyada ka dhiga xarunta Dugsigii Sare ee Booliiska ee Scuola Polizia, oo hadda loo yaqaan Akadeemiyada Ciidanka Booliiska ee Janaraal Kaahiye.
Bilowgii 1980kii ayuu marxuunka waxuu u wareegey dhanka Madaxkamadaha isagoo xilal kala duwan ka soo qabtey dalka sida inuu muddo dhowr sano ahaa ku xigeenka Xeer Ilaaliya Maxkamada Badbaadada Dalka Somalia, iyo in Sidoo kale sanadkii 1982 ilaa 1986dii ahaa Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ee Goboladda Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya.
Waxii intaas ka dambeeyey Marxuum G/Sare C/hi Cabdi Waraabe waxaa uu dib ugu soo biirey Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, waxuu qabtey xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin: Taliyaha Saldiga Booliiska ee Kismaayo, Baydhabo, Taliye ku xigeenka Hogaanka Ciidanka Booliiska & Taliyaha Laanta Tirada Ciidanka Booliiska iyo isagoo markii dambe noqdey Taliyaha Qeybta Booliiska ee Gobalka Bakool ilaa ay burburto dowladda Marxuum Maxamed Siyaad Barre ee sanadii 1991.
Marxuumka ayaa shaqooyin kala duwan u soo qaybtey dalka Soomaaliyeed, waxuuna ka soo shaqeeyey dhamaan inta badan gobolada dalka Soomaalida sida Jubooyinka, Shabeelada Hoose, Banaadir, Gaalkacyo, Garoowe, Hargeysa, Burco iyo Ceerigaabo,
Alla ha u naxariistee, marxuumka ayaa maleeshiyo hubeysan ku dileen Degmada Buur Hakaba, ee Gobalka Bay 26kii February 1991 isagoo ku sii jeeda Gobalka Bay, kana soo noqdey Shir Dowladdii Cali Mahdi Maxamed ugu baaqdey siyaasiyiinta gobollada dalka Soomaaliyeed.
Marxuum Cabdullaahi Cabdi Waraabe waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa:
Nin u soo halgamay una soo kifaaxay xorriyaddii iyo midayntii Somalia.
Si dhab ah u aamminsanaa midaynta 5tii qaybood ee ay gumaystayaashii reer Yurub u qaybiyeen Somalia.
Nin Ahlu diin ah oo aad u ixtiraam badan isla markaasna xikmad iyo soo dhoweyn wanaagsan
Ka qeyb noqdey difaaca dalkiisa, isagoo ka qeyb galey dagaalkii 1977kii, ciidankii uu hogaaminaayeyna ay guul ka soo hooyeen deegaanka Fiyaan Biro oo u dhow Jigjiga.
Inuu ahaa sharci yaqaan aqoonta ciidanka Booliiska Soomaaliyeed kobciyey isla markaasna kaalin muuqda ku lahaa diyaarintii sharuucdii ciidanka booliiska Soomaalyeed. Sidoo kale ilaalin jirey (taasoo ka mid ahayd xilalkiisii) nidaanka iyo sharuucda dalka lahaa
Inuu si aad ah uga soo horjeedey dulmiga, mushuqmaasuqa, nin jecleysiga, qabyaalada, isla markaasna ahaa geesi aan la gamban jirin inuu sheego xaq muwaadiniinta Soomaaliyeed leeyihiin iyo ilaalinta sharafka dalka.
Marxuunka oo ay isla soo shaqeeyeen sharci yaqaano aan la soo koobi karin oo si aad ah dalka looga yaqaan gaar ahaan ciidanka Booliiska iyo Maxkamadaha; waxaa la xusi karaa: Maxamuud Geele Yuusuf, Jen. Cismaan Xaaji Cumar Faalco, Maxamed Sheekh Daahir, Cabdiqaadir Zoobe, Max’ud Faarah Cumar Indhabuur, Prof Guure, General Axmed Jaamac Cadani, Jaamac Maxamed Qaalib, Avv. C/raxmaan Max’ed Cumar, iyo sharci yaqaano dalka taariikh muuqda ku lahaa oo halkaan lagu soo koobi karin.
Marxuum Cabdullahi Cabdi Waraabe waxaan Alle uga baryeynaa inuu ku waariyo Jannadiisa guud ahaan Ummadda Somaliyeedna uu ugu yabooho madax aan ceeb ka tegin sidiisii oo kale. Qoyskiisii gaar ahaaneed iyo asaxaabtiisiina samir iyo iimaan.
Welcome to Idalenews.com – Filo Dhowaan